Air Freight Insurance စင်္ကာပူ | သင့်ကုန်ပစ္စည်းများကို လုံခြုံအောင် ထိန်းသိမ်းခြင်း။
India မှ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
Korea မှ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
UK မှ ပို့ဆောင်ခြင်း။
USA မှ ပို့ဆောင်ခြင်း။
Dangerous Goods (DG) ပို့ဆောင်ခြင်း။
Door to Door ပို့ဆောင်ခြင်း။
Supply Chain ဝန်ဆောင်မှုများ
အသုံးပြုပြီးသား သင်္ဘောကွန်တိန်နာများကို ဝယ်ယူပါ။
လေကြောင်း ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး အာမခံ ဆိုသည်မှာ လေကြောင်းမှ ပို့ဆောင်မှု ဆုံးရှုံးခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှု ဖြစ်စဉ်တွင် လျော်ကြေးငွေ အာမခံသည့် တရားဝင် စာရွက်စာတမ်းများကို ရည်ညွှန်းပါသည်။
စျေးသက်သက်သာသာနဲ့ စျေးနှုန်းသက်သာတဲ့ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအာမခံကို ရှာဖွေနေပါသလား။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပြီး သင်လိုအပ်သည်များကို အသိပေးပါ။
Air Freight Insurance အသုံးမပြုမီ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များ
အရှိန်ဖြင့် လာပေးသည်။ လေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ ယှဉ်ရင် ကုန်ကျစရိတ်က အတော်လေး မြင့်မားပါတယ်။ ပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး.
လေကြောင်း ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုသည် အများအားဖြင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရန် ရက်အနည်းငယ်သာ ကြာလေ့ရှိပြီး ထို့ကြောင့် ပို့ဆောင်မှုမုဒ်မှာ အတော်လေး မြန်ဆန်ပါသည်။ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ကုန်ပစ္စည်းများကို လေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် ပိုမိုထိရောက်စွာ တင်ပို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးသည် ကန့်သတ်ထားသောလေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုနေရာလွတ်ကြောင့် အရေအတွက် သို့မဟုတ် အရွယ်အစားပိုကြီးသော ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခြင်းအတွက် မသင့်လျော်ပါ။
လေယာဉ်များသည် နေ့စဥ်ပျံသန်းမှုများဖြင့် လည်ပတ်နေသောကြောင့် ပျံသန်းမှုအား ဖျက်သိမ်းပါက နှောင့်နှေးမှုများစွာ ဖြစ်စေမည်မဟုတ်ပေ။ ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုသည် အချိန်အများစုတွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း သွားမည့်နေရာသို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
Air Freight Insurance Coverage ၏ အဓိကအမျိုးအစားများ
"All-Risk" အာမခံပေါ်လစီသည် ပြင်ပအချက်များကြောင့် ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုများရှိသည့်အခါတွင် ကဏ္ဍများစွာအတွက် အကျုံးဝင်သောကြောင့် ၎င်းသည် အကျယ်ပြန့်ဆုံးဖြစ်သည်။ အကျုံးဝင်သော အချို့သောအချက်များမှာ တိုက်မိခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်း၊ ယိုစိမ့်ခြင်းနှင့် ကွဲအက်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ သို့သော်လည်း အန္တရာယ်အားလုံးကို ကာမိခြင်းမဟုတ်ပါ - အချို့သော ဖယ်ထုတ်ထားသည့်အရာများသည် မသင့်လျော်သောထုပ်ပိုးမှု၊ စိတ်ကြိုက်အာဏာပိုင်များမှ ကုန်ပစ္စည်းများကို ငြင်းပယ်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုပြီးသားကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။
သီးသန့် ပျမ်းမျှ (FPA) လွှမ်းခြုံမှု အခမဲ့
FPA သည် အသုံးပြုပြီးသား ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကဲ့သို့ အချို့သော ထုတ်ကုန်များနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ FPA သည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့် စုစုပေါင်းဆုံးရှုံးမှုကို အကျုံးဝင်ပြီး ၎င်း၏ အကျုံးဝင်မှုသည် နစ်မြုပ်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်းစသည်ဖြင့် ပါဝင်သည်။ သို့သော်လည်း "All-Risk" Coverage နှင့် မတူဘဲ၊ ဥပမာ၊ FPA သည် ယိုစိမ့်မှုနှင့် ကွဲအက်မှုကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုများကို အကျုံးမဝင်ပါ။ ပြင်းထန်သော ရာသီဥတုကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုများသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဆုံးရှုံးမှုရှိမှသာ အကျုံးဝင်ပါသည်။
ပျမ်းမျှ (WA) လွှမ်းခြုံမှုဖြင့်
WA လွှမ်းခြုံမှုသည် ပြင်းထန်သောရာသီဥတုကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုများပါဝင်သည့် FPA လွှမ်းခြုံမှု၏ တိုးချဲ့မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ FPA နှင့် WA နှစ်ခုစလုံးသည် ခိုးယူမှုကဲ့သို့သော အခြားသော လွှမ်းခြုံမှုပါဝင်ရန် နောက်ထပ် တိုးချဲ့နိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့် Air Freight Insurance ကိုဝယ်ပါသနည်း။
Credit Letter of ရယူခြင်း။
ဘဏ်မှအကြွေးစာတစ်စောင်ကို စိတ်ကြိုက်ရှင်းလင်းမှုအတွက် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် မကြာခဏလိုအပ်ပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်၊ အကြွေးစာတစ်စောင်ရရှိရန် အာမခံမူဝါဒတစ်ခုရှိနေရန် လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့် ငွေရရန်အတွက် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး အာမခံသည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။
သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာရန်အတွက် အချို့သောနိုင်ငံများတွင် အာမခံမူဝါဒတစ်ခု လိုအပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ချောမွေ့စွာ ပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို သေချာစေရန် ထိုသို့သောကိစ္စမျိုးတွင် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးအာမခံကို ဝယ်ယူရန် လိုအပ်ပါသည်။
ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုအာမခံသည် တင်ပို့မှုဆုံးရှုံးခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် အကျုံးဝင်စေသောကြောင့် ယင်းကဲ့သို့ ဖြစ်ရပ်များတွင် ပို့ဆောင်သူများအား လျော်ကြေးပေးရန် ခွင့်ပြုပေးပါသည်။
M&P International Freight ကို ဘာကြောင့် ရွေးချယ်တာလဲ။
Customer ကို ဦးစားပေးအဖြစ်
သင်၏စံပြလေကြောင်း ကုန်စည်ပို့ဆောင်သူအနေဖြင့်၊ M&P နိုင်ငံတကာ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှု ထူးချွန်မှုသည် ၎င်းတို့၏ ဦးစားပေးဖြစ်သောကြောင့် အရည်အသွေးနှင့် ထုပ်ပိုးထားသော ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးရန် ကြိုးပမ်းသည်။
M&P သည် ဖောက်သည်များအား ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသောစျေးနှုန်းများဖြင့် ထိရောက်သောလမ်းကြောင်းကို အာမခံချက်ပေးကာ ကျယ်ပြန့်သောချိတ်ဆက်မှုများကို ထူထောင်ထားသည့် ကျော်ကြားသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
လေကြောင်း ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံဖြင့်၊ သင့်လေကြောင်း ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး အာမခံအတွက် ယှဉ်ပြိုင်မှုနှုန်းထားများကို ပေးဆောင်နိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ပါသည်။ ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
နောက် ၃ နာရီအတွင်း အလုပ်ပြန်ဆင်းပါမည်။ ပိုမိုမြန်ဆန်သော ကိုးကားချက်ရရန် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပေးဆောင်ပါ- အမှတ်ယူပါ၊ ဆင်းရန်မှတ်၊ ကုန်အလေးချိန်နှင့် အတိုင်းအတာ :)
ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး ပိုမိုတိကျသောကိုးကားမှုအတွက် ပုံများကို ပေးပါ။
ဖိုင်များကို ဤနေရာတွင် သို့မဟုတ် ချပေးပါ။
မက်။ ဖိုင်အရွယ်အစား- 256 MB.
ဖုန်း (65) 6221 2218
37 Jalan Peimpin
37 Jalan Peimpin, #04-10 MAPEX
Gul Way #02-04 20
မူပိုင်ခွင့် © 2021 M&P International Freights Pte Ltd. အခွင့်အရေးများ လက်ဝယ်ရှိသည်။